मातृभूमिका लागि कुनैपनि बेला आउन सक्छु–थर्क प्रेम सेन « Sansar News
८ आश्विन २०७४, आईतवार ११:१९
थर्क प्रेम सेन, स्याङजा जिल्लामा जन्म, बुटवलमा स्थायी बसोबास र हाल यूकेमा रहँदै आएको तीन दशक भएको छ । २०४३ सालमा बिट्रिस आर्मीको लाहुरे भएर यूके पसेका सेन आर्मिबाट रिटायर्ड भएपछि व्यवसाय तथा सामाजिक काममा सक्रिय रहेका छन् । एनआरएनए आइसीसी सदस्य समेत रहेका सेन एनआरएनए अन्तर्गतको ‘रोड ट्राफिक एजुकेशन सेफ्टी अफ नेपाल’ टाक्सफोर्सका संयोजक पनि छन् । यस टाक्सफोर्सको मुख्य उद्देश्य भनेको आफूहरूसँग भएको सीप ज्ञान तथा प्रविधिहरूलाई मातृभूमिका लागि परिचालन गर्ने रहेको बताउँछन्, उनी । प्रस्तुत छ उनै सेनसँग ऐक्यबद्धताले गरेको कुराकानी :
युके कहिले र किन जानु भयो ?
म कलेज पढ्दै गर्दा नै २०४३ सालमा ब्रिटिश आर्मीको लाहुरे भएर यूके आएको हुँ । ब्रिटिश आर्मीको कम्युनिकेशन÷कम्प्युटर स्पेशलिष्ट भएर वल्र्डवाइड काम गरो । आर्मीबाट रिटायर्ड भएपछि अहिले ‘ए.डि.आई फर ट्राफिक एजुकेशन एण्ड रोड सेफ्टी युके’को डि.भि.ए को तलदेखि सबैभन्दा माथि सम्मको ट्रेनिङ एण्ड टेस्टको काम गर्छु ।
यहाँ एनआरएनएको ‘रोड ट्राफिक एजुकेशन सेफ्टी अफ नेपाल’ टाक्सफोर्सको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, यो टास्कफोर्स किन बनाइएको हो ?
यो टाक्सफोर्स मातृभूमिका लागि शिक्षा, क्षमता, दक्षता र प्रविधिहरू परिचालन गर्ने प्रोजेक्ट हो, परियोजना नेपालका लागि अत्यन्त जरुरी छ भन्ने ठानेका छौं । हाम्रो देशमा सडकका कारण जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । मेरो ८० देशको घुमाइ र अनुसन्धानबाट नेपालको प्रणाली झाँक्रीकै अवस्थामा रहेको देखेको छु । त्यसैले असाध्यै सडक दुर्घटना र जाम हुन्छ । हामी एनआरएनएले २०२० सम्म नेपालको सडक सुरक्षालाई लन्डन, युके र टोकियो तथा स्वीटजरल्याण्ड जस्तो सुरक्षित र सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना बनाएका छौं । यसैलाई मनन गरेर एनआरएनए आइसीसी टाक्सफोर्सले मेरो संयोजकत्वमा १५ देशबाट १–१ जना सदस्य रहने गरी उपसमिति बनाएको हो । धेरैपटक नेपाल आएर यातायात र ट्राफिक डिआइजीपी टिमलाई सरसल्लाह र सुझाव दिने गरेका छौँ । तर सम्बन्धित निकायहरूले हाम्रो कुरालाई त्यति चासोका रुपमा लिएको पाएका छैनौँ, त्यसैले काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।
नेपालको भौगोलिक कारणले पनि यहाँका सडक असहज छन्, सडक सहजका लागि यहाँसँग कुनै योजना छ की ?
ट्राफिक जाम सानो ठूलो जहाँ पनि हुन्छ । तर हाम्रो नेपालमा जे भइरहेको छ र ट्राफिक जाम खुलाउने जे जति काम भएको छ यो प्रणालीले अब काम गर्दैन, यो पुरानो भइसक्यो । लामा, झाक्री प्रणालीले काम नगरेरै काठमाडौंको यो बेहाल भएको हो । दुर्घटना र ट्राफिक जाम हुने हजार कारण छन् । रोडको डिजाइन पनि एक हो । नेपालको बाटोको साइडमा खुला नाला वा गलत साइडको पुल बनाइएका छन्, हेर्दा पनि व्यवसायिक र प्राविधिक रुपले राम्रो छैन । यो गलत हो भनेर माथिल्लो निकाय तथा नेतृत्वलाई थाहा हुनुपर्ने हो तर यहाँ कसैलाई पनि केही मतलब छैन । उनीहरूलाई यो के हो थाहा पनि छैन जस्तो लाग्छ नेपालको बाटो सानो भएको र बनाउने पैसा नभएर होइन, बरु भएकोलाई पनि प्रयोग गर्न नजानेको हो । यसै विषयमा मैले ‘युनिभर्सल हाइवे कोड फर अल रोड युजर’ भन्ने बुक पनि लेखेको छु । सम्बन्धीत निकायलाई चाहिएमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । अरु के भनौँ र बिरामीले औषधि खाइदिएन भने डाक्टरले केही गर्न सक्तैन् ।
एनआरएनएले यो परियोजनामा के काम गर्न सक्छ ?
म सुरुदेखि नै एनआरएनएको आइसीसी सदस्य रहँदै आएको छु । एनआरएनएको यो परियोजनालाई मातृभूमि नेपालले चाहेसम्म स्वयमसेवीका रुपमा ट्राफिक शिक्षा र सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा विशेषज्ञको रुपमा काम गर्न सक्छ ।
गोर्खा स्कुल अफ मोटरिङको पनि प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ यसले के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ ?
गोर्खा स्कुल अफ मोटरिङ युके÷युरोप रजिस्टर्ड ड्राइभर एण्ड भेइकल ट्रेनिङ इन्स्च्यिुट हो । हामीले कुनैपनि सवारीका विषय र युकेको कुनैपनि स्तरको पढाइ डिभिएसए प्रणालीमार्फत गर्छौँ, जुन संसारकै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ।
युकेमा रहेका नेपालीका बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ की ?
यूकेमा अहिले झण्डै २ लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । त्यसमा नेपालीका ३ सय भन्दा बढी संस्थाहरू छन् । युकेमा नेपालीको आगमन १९६२ देखि हो । नेपालीहरू लाहुरे बनेर आउने र जागिर सकिएपछि नेपाल नै फर्कन्थे । तर २००२ देखि मेरै पहलमा औपचारिक स्थायित्वका लागि विभिन्न चरणको प्रक्रियापछि २००४ देखि बिट्रिस गोर्खाले बसाई गरे लगत्तै विद्यार्थीहरूको पनि आगमन भएको देखिन्छ ।
युकेमै बस्नुहुन्छ की देश फर्कने साोच बनाउनु भएको छ ?
नेपाल वा बेलायत जहाँ बसेपनि हामी नेपाली हौँ र नेपाली नै भन्छौँ, नेपाल र नेपालीका लागि काम गर्छौ । मेरो घर जग्गा सबै नेपालमा छ । वर्षको २–४ पटक आउने जाने गरिरहन्छु । आवश्यक परे आफ्नो मातृभूमिका लागि क्षमता र ज्ञान बाँड्न कुनैपनि बेला आउन सक्छु ।
यहाँको विचारमा देशको आर्थिक समृद्धिका लागि एनआरएनएको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
हामी नेपालीले धेरै पीडा भोगिरहेका छौँ । यहाँ धेरै कुरा अव्यवस्थित छन् । यहि पीडामा ५० लाख नेपाली गास बासको खोजीमा गैरआवासीय नेपाली बनेका छन् । ५० लाख मध्ये केही सफल व्यवसायी तथा ज्ञान र क्षमता भएका छन्, उनीहरूलाई प्रयोग गर्न जानेमा मातृभूमिको उज्यालो भविष्यका लागि उपयोगी हुनेछ ।
हामीले यातायातमा देखिने समस्या समाधान गर्न सक्यौं भने त्यो पर्यटन विकासका लागि उपयोगी हुनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य, उत्पादन र शिक्षा क्षेत्रमा पनि लाभदायी हुन्छ । उच्च ट्राफिक शिक्षा र सुरक्षा भनेको हाम्रो शरीरमा हुने स्वस्थ्य रक्त संचार जस्तै हो ।